गाउँखाने कथा - ५ (Nepali Gau Khane Katha)
कोठे साहित्यिक यात्रा भब्यताको साथ मनाइयो
अपडेट: गोली भएको भुइंको डोली बदाम हो। यस पटक दिलिप आचार्यले शुरुमै मिलाउनु भएको छ। प्रयास गर्ने र मिलाउने सबैलाइ धन्यबाद। दिलिपजीलाइ भने एउटा नया गाउं पुरस्कार। ल दिलीप जी कुन गाउं रोज्नुहुन्छ?
भुइंको डोली थिचेर खोली,भित्र हेर्दा दुइ-तीन गोली, के हो?
आंफै ले सोच्दा केही आएन, दिलिप जि को उत्तर देखे पछी यती पनि किन नआएको मलाई जस्तो लाग्यो :D
खै मैले गाउं खाने कथा मिलाउन त पहिले question out भए मात्रा हो :D
कुन गाउ रोज्नु हुन्छ है त हाम्रो दिलिप जि ले !
लौ दिलिप जि लाई कर्णालीतिरको गाउ पो दिने कि, सुन्दरताले भरीपूर्ण, साच्चिकै नेपाली पन झल्कने खालको। लौ बिचार गर्नु है साथी हो.
ल!, जितिएछ पो त। अब गाँउ चाहि आफ्नो घरको दायाँ- बाँया दुईवटा गाउँ छन, हाँडिगाँउ र मालीगाँउ । यि अहिलेसम्म कसैले पाईसकेका छैनन भने यिनै मध्यको कुनै एउटा दिनुहोस । घर नजिक भएकोले 'बाली' उठाउन पनि सजिलो हुन्छ ।
हाहाहा हाँडीगाउँ र मालीगाउँमा अब के बाली उठाउनु र दिलीपजी ? बाली त हैन फोहोरको डुंगुरचाहिँ पक्कै उठाउन पाइएला ।
फोहोर भएर के भो र?
यसपाला म गाँउखाने कथाको पुर्ण रुपमा खेलेर "हाँडीगाँउको सेरोफेरो जम्मै मेरो, त्यहाँबाट निस्कने फोहोर चाहिँ जम्मै तेरो" भनेर फोहोर जत्ती सबै छाडी हाल्छु नि !।
अब देखी हांडी गाउं दिलीप जि को नाममा। बधाइ छ है, कहिले कांही हाम्लाइ पनि जात्रा हेर्न दिनुहोला।